हलोजन तत्वहरू र गुणहरू
तत्व समूहहरूको गुण
हलोजनहरू आवधिक तालिकामा तत्वहरूको समूह हो। यो एक मात्र तत्व समूह हो जसमा तत्वहरू तीनवटा मुख्य राज्यका सामग्रीहरू अवस्थित कोठामा तापमान (ठोस, तरल, ग्याँस) मा अवस्थित सक्षम हुन्छन्।
हज्जेन शब्द "नमक-उत्पादन" को अर्थ हो किनभने हज्जनहरूले धातुहरूको साथमा धेरै महत्त्वपूर्ण लवणहरू उत्पादन गर्न प्रतिक्रिया गर्दछ। वास्तवमा, हज्जेसन यति प्रतिक्रियाशील छन् कि उनी प्रकृतिमा नि: शुल्क तत्वको रूपमा हुँदैनन्।
तथापि, अन्य तत्वहरूसँग संयोजनमा सामान्य हुन्छन्
यहाँ यी तत्वहरूको पहिचानमा एक नजर छ, आवधिक तालिकामा तिनीहरूको स्थान र उनीहरूको साझा गुणहरू।
आवधिक तालिकाको हलोजनहरूको स्थान
होलोजन्स समूह VIIA मा आवधिक तालिका वा समूह 17 को IUPAC नामांकन को प्रयोग गरेर स्थित छ। तत्व समूह एक विशेष वर्ग nonmetals हो । तिनीहरू ठाडो लाइनमा, टेबलको दाँया-हातको दिशामा भेट्टाउन सकिन्छ।
हलोजन तत्वहरूको सूची
त्यहाँ या त पाँच या6हलोजन तत्वहरू छन्, निर्भर गर्दछ कि तपाइँ समुहलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ। हलोजन तत्वहरू छन्:
तत्व 117 (एक्यूनिसेप्टिकियम, यूस), एक निश्चित हदसम्म
यद्यपि तत्व 117 समूह VIIA मा छ, वैज्ञानिकहरूले भविष्यवाणी गर्दछ कि यसले हलोजन भन्दा मेटालोलज जस्तै व्यवहार गर्न सक्छ। त्यसोभए, यसको समूहमा अन्य तत्वहरूसँग यो केही गुणहरू साझेदारी हुनेछ।
यी प्रतिक्रियाशील न्युमेटल्सहरूमा सात भोल्युन इलेक्ट्रोन छन्। एक समूहको रूपमा, होलोजनहरूले अत्यधिक चर भौतिक गुणहरू प्रदर्शन गर्छन्। कोठाको तापमानमा ग्यास (एफ2) तरल (ब्रा2) ग्यासस (एफ2र क्ल2) गर्न होलान्सेन्स दायरा। शुद्ध तत्वको रूपमा, तिनीहरू नियोपोलियन कोभलेंट बाण्डद्वारा सामेल भएका परमाणु संग डायटामिक अणुहरू बनाउँछन्।
रासायनिक गुणहरू बढी समान छन्। हज्जेसनसँग धेरै उच्च विद्युत्गेटिटिटीहरू छन्। फ्लोरेनसँग सबै तत्वहरूको उच्चतम इलेक्ट्रोनप्याटिटिटिटी छ। हज्जनहरू स्थिर आयनिक क्रिस्टलहरू सिर्जना गर्दै अल्ल्कली धातुहरू र एल्किन पृथ्वीसँग विशेष रूपमा प्रतिक्रियाशील हुन्छन्।
साधारण गुणहरूको सारांश
तिनीहरू ery उच्च इलेक्ट्रोनगोटिटिटी हुन्
सात वालेता इलेक्ट्रोन (एक स्थिर ओकटनेट को एक छोटो)
अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, विशेष रूप देखि एल्कली धातु र एल्कलीन धरती संग। होजलसहरू सबैभन्दा प्रतिक्रियात्मक नमुना हुन्।
किनकि तिनीहरू यति प्रतिक्रियाशील छन्, मौलिक हज्जन्स विषाक्त हुन्छन् र सम्भावित घातक हुन्छन्। भारी हज्जेसनसँग विषाक्तता घटाउँदछ जबसम्म तपाई अटटिनमा पुग्नुहुन्छ, जुन यसको रेडियोश्यापकताको कारण खतरनाक छ।
एसटीपी परिवर्तनमा मुद्दा को रूपमा तपाई समुहलाई तल सारिदिनुहुन्छ। फ्लोरेइन र क्लोरीन ग्याँसहरू हुन्छन्, जबकि ब्रोमोन तरल हुन्छ र आयोडिन र अटेरटिन ठिक हुन्छ। यो अपेक्षा गरिएको छ तत्व तत्व 117 साधारण परिस्थितिमा ठोस हुनेछ। भइबल बिन्दुले समूहलाई सार्दै बढाउँछ किनभने भ्यान ड्रे वाल बल बढि आकार र परमाणु जनको साथ अधिक हुन्छ।
उच्च रिएटिटिजले उत्कृष्ट डिस्फेसकहरू हज्जन्स बनाउँछ। क्लोरीन ब्लीच र आयोडिन टिक्नेचर दुई प्रसिद्ध उदाहरणहरू हुन्। संगठनमोब्रोमहरू ज्वाला retardants को रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
हलोजनहरूले धातुहरूको साथमा नमक बनाउँदछ। क्लोरीन आयन, प्राय: टेबल नमक (NaCl) बाट प्राप्त मानव जीवनको लागि आवश्यक छ। फ्लोरेइन, फ्लोराइडको रूपमा, दाँत क्षय रोक्नको लागि प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ। हज्जेसन पनि लैंप र फ्रिजमा प्रयोग गरिन्छ।
आवधिक तालिका को तत्व परिवार
आवधिक तालिकामा सबैभन्दा प्रतिक्रियाशील मेटल
साधारण पदार्थहरूको घनिष्ठता तालिका
आजको तालिका तालिकाबद्ध कसरी हुन्छ?
तत्व प्रतीक जुन विच्छेद हुन सक्छ तत्व तत्वहरूको प्रयोग गरेर
प्रिन्टयोग्य आवधिक तत्व को तालिका - इलेक्ट्रोनगोटिविटी
दोस्रो विश्वयुद्ध: एल अलेनिनको पहिलो युद्ध
विभाजन कसरी गर्ने
तीन प्रकारका नैतिक प्रणालीहरू
भाषात्मक शैली मिलान (LSM)
तपाईको ट्याब्लेट टेनिस घट्टेहरु लाई कति पटक बदल्नु पर्छ?
अज्ञात कवि कवि जोसेफ ओसेलसँग साहित्य ज्विटिजस्ट ट्राफिक गर्दै
शीर्ष3आवश्यक जर्ज जोन्स एलबम
सुसमाचार सुसमाचार अनुसार, अध्याय 13
किन म एक बदसूरत डकलिंग कर्भेट को लागी खोज्दैछु
एक वोकल अफसेट के हो?
शीर्ष स्पेस प्रश्नहरू
ओलम्पिक बक्सिङ इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विवाद
Mollusk को शरीर मा एक मन्ट के हो?
अफ्रिका विजेता राष्ट्र विजेता
"यूबी क्यारिटस" गीत र अनुवाद